Omdala PC Imidlalo – Dlala Free XXX Imidlalo i-Intanethi
Abadlali yokufumana ubudala nangaphezulu "ubufazi"
I-Imidlalo Convention urhwebo elifanelekileyo sele bafudukela ukusuka Leipzig ukuba Cologne. Ngomhla we-120,000 isikwere meters esilandelayo ukuya Rhine, abantu bayakwazi ukubona yonke into ukuba ikhompyutha freaks ka-phupha. Wonke wesine isijamani ukudlala kwi computer kwaye njalo ikhuthaza i-ukuthengisa omdala PC imidlalo. Lokuqala nesiqingatha kulo nyaka, 24.8 yezigidi omdala PC imidlalo baba zithengiswe. Nangona declining iintengiso e-United States, ikhompyutha umdlalo ishishini ingaba senza kakuhle kwi-Germany - kwenzekile umbonileyo a ezimbini ipesenti ukwanda profits kuthelekiswa kulo nyaka uphelileyo. Kengoko bakholelwa ukuba siza kubona okanye kwi-iintengiso kunyaka olandelayo, ukusazisa kuya kukhula dynamically., Siyi-sele disappointed kunye ephakathi ukukhula kulo nyaka. Xa kuthelekiswa namanye amazwe, i-Germans ingaba kwakhona senza kakuhle, kodwa babeya kuba ndonwabe qinisekisa ukuba kube kabini inani ngalinye lokukhula kunyaka olandelayo.
Omdala PC imidlalo zisuke kakhulu kakhulu umba omdala inkcubeko
Ngokunxulumene uqikelelo, ngowama-2020, i-inzuzo kwikhompyutha umdlalo software kwihlabathi liphela amounted ukuba ngaphezulu kwama-40 bhiliyoni dollazi. Injongo enjalo boom kwakukho izinto ezintsha kwi-2019. Kwi-2019, sino ukukhula imibulelo mobile gaming consoles. Ukuba indlela, manufacturers ayikwazi happily end 2019. Oku trend waqhubeka ngowama-2020. Kwaba ingakumbi noticeable ukuba i-avareji ubudala abasebenzisi ukwanda. Abadala bamele kanjalo warmed phezulu kuba omdala PC imidlalo kwi-onesiphumo isithuba, kwaye kukho ukubonelelwa abafazi phakathi kwabo. Similiselwe ukulandela trend kwi ariya iqela ekujoliswe kulo abanye ixesha ngoku., Oku kuthetha ukuba abadlali ngo iifayile yokufumana ubudala kwaye ngakumbi 'ubufazi'. Wonke wesithathu umdlali ngu ibhinqa, kwaye uninzi ibhinqa nxaxheba basenokuba phawula njengoko casual abadlali. Lonto ibonisa ukuba nathi ukuba nesiqingatha i-abadlali ngo relaxed. Ikhompyutha Imidlalo Elifanelekileyo kwi-Cologne kuthatha care ka-occasional kwaye rhoqo abadlali' satisfaction - ngakumbi precisely, 420 exhibitors ukusuka 30 amazwe.
Imidlalo yevidiyo zithe inxalenye ubomi bethu kuba decades. Baya kuba ixesha elide ukuba i-kubalulekile inxalenye ethandwa kakhulu inkcubeko, ngokubonelela entertainment kuba bobabini abantwana kunye nabantu abadala. Ngomhla wokuqala, baba kwathathelwa ingqalelo into esetyenziselwa ukuba abe kuba younger abantu, kodwa njengoko izizukulwana ka-ezinzima gamers zisuke kakhulu abazali. Kwi-umahluko, baya kuba evolved significantly ukususela beginnings ka-iikhompyutha kunye kuqala ze-consoles. Yabo ukubaluleka sele grown kwi-incopho ukuba kukho sele debates namhlanje malunga nokuba ngaba, ukuba asingabo bonke, ngoko ke ubuncinane, abanye kubo ingaba iqwalaselwe unguye., Imihla pixelated screens kwaye limited midi izandi ingaba ixesha elide-emi memories. Njengoko iteknoloji advances rapidly, imidlalo yevidiyo kubalandela ngayo inyathelo lesi-yi-inyathelo, kwaye zabo onesiphumo inyaniso uba ukubonelelwa njenge yokwenene ebomini.
Ishishini sele ukwanda kwi-mibini decades, ukuhlanganiswa likhuni ifeni kwihlabathi liphela kwaye kokubhala view-size earnings, xa sithe kujike & ncamathiselamessage status Hollywood phoselani ngokwayo kwi adaptations ka kakhulu notable achievements kuba cinemas. Omdala PC imidlalo kuba ixesha elide sele mainstream, kodwa endaweni yabo ikhangeleka kuba ngaphezulu kakhulu kunokuba ngonaphakade kwindawo entsha inyaniso. Ukucinga nabani sele na inzuzo kwi coronavirus pandemic ukuba sele kunabela kwihlabathi liphela kwaye locale kuthi wethu amakhaya abo. Kulo mzekelo, ividiyo umdlalo ishishini akusebenzi kufuneka ngokwesiqu gatherings kwi-physical ihlabathi xa yonke into kuthatha indawo kwi-onesiphumo., Amawaka kwaye amawaka iiyure burned ngaphambili kwi-computer kunye amagama eencwadi ezahlukeneyo genres ukuba kunikela into wonke umntu - ukususela epic gangbangs, hardcore BDSM, cumming kwi-umlomo ukuba enchanting amanzi emidlalo imidlalo ngabona namanani recipe kuba quarantine.
Ngoko ke, akukho surprise ukuba yehlabathi ividiyo umdlalo ishishini ngu uqikelelo ukuba ingaba earned malunga ne - $ 180 bhiliyoni kwiminyaka ophelileyo, ngaphezu emidlalo kwaye wefilim imizi-mveliso zidibene! Ingxelo efana Coachella kuba lirhoxisiwe, kodwa izigidi zithe nako sabahlanganisela ngaphakathi cyberspace ukudlala Fortnite. Nkqu amalungu ezopolitiko kwi-West kuba iqalile ukuba baguqukele omdala PC imidlalo ukubonelelwa ukufikelela voters ngabo, ezifana inyuke i-american politician Alexandra Ocasio Cortez abo streamed herself ukudlala "Phakathi Kwethu.,"Kanye phezu ixesha, amalungu ezopolitiko babefuna ukubonisa njani hip kwaye elihle zinjalo kwaye uthando yonke into kulutsha uthando yi-appearing e concerts, kwaye ngoku concerts zithe indawo nge-omdala PC imidlalo.
Covid akazange qala esi trend kodwa significantly intensified ngayo, kodwa ixesha elide phambi quarantine, omdala PC imidlalo triumphed njengoko uninzi ethandwa kakhulu ifomu entertainment phakathi omdala abantu, ngokusekelwe iziphumo a nzulu nge Ntsasa Udibane, i-data ifemi enxulumene consumerism, apho wabonisa ukuba controversial YouTube inkwenkwezi PewDiePie, a Swede abo publishes reviews ka-imidlalo yevidiyo ngomhla wakhe isiqhagamshelanisi, ufumana igama ngokulinganayo okanye ngaphezulu ezaziwayo kune, ndithi, ukuya kowe basketball inkwenkwezi LeBron Uyakobi phakathi kwamadoda Kwisizukulwana Z., Yokugqibela entlakohlaza, i-Adweek-arhente wabhengeza ukuba gaming ishishini, nge - $ 138 billion ngonyaka, surpassed kakhulu famous i-american emidlalo franchises, i-NFL, NBA, MLB, kwaye NHL zidibene. Kuyo yonke culminated kwi emva kwexesha 2020 xa kwaba ibalwa ngokusemthethweni ukuba ividiyo umdlalo ishishini experienced ingeniso uhlumo kangangoko 20 ipesenti.
I-imidlalo okokuba babebaninzi kakhulu fetishized kulo nyaka uphelileyo baba Crusader Iikumkani 3 kwaye South Park: Intonga Inyaniso. Nkqu actress kwaye ethandwa kakhulu iqela kubekho inkqubela Lindsay Lohan ayikwazanga kumelana imfuneko posename kunye yakhe entsha omdala PC imidlalo kuyo iifoto ibonise kwiqonga loluntu. Ngenxa umbindi we ingqalelo kanjalo sele yayo opposing amacala, oko kusenokuba ebone kwi-umzekelo kakhulu anticipated blockbuster gaming isiganeko lonyaka - ividiyo umdlalo Ngokwesiqu Ukusebenza: Andromeda., Olude-kwapapashwa kwaye hype-ukudlala umdlalo angeliso avant-garde soundtrack featuring songs yi-uninzi famous abazobi kwiminyaka yakutsha nje, ezifana Grimes, Sophie, kwaye $ AP Rocky, starring Keanu Reeves, iindleko uphuhliso iqela i-incredible $ 317 million. Yi-uthelekiso, olona expensive Hollywood wefilim ngonaphakade ngu "i-avatar" ukususela ngo-2009, egama lwabiwo-mali inikwe 478 yezigidi dolla, ethetha ngokwaneleyo malunga njani vala imveliso kolwabiwo-mali ka-imidlalo kwaye ezininzi ezibalulekileyo wefilim amaphulo kuba kuza.